Unashamed Australia Recap — njem Lee - Official Site
A di na nwunye nke izu gara aga, m we yipu ha enweghị ụkpụrụ na-aga n'akụkụ nke ọzọ nke ụwa na ụfọdụ n'ime ọkacha mmasị m ndị. Tedashii, Pro, KB, Thi'sl, DJ PDogg, anyị tour manager Steadman, na m na-aga ka Australia na-eje ozi Jesus.
Ihe anyị mere
Anyị nọrọ izu abụọ ala n'okpuru njem site Brisbane, Melbourne, Perth, na Sydney. Na nke ọ bụla n'ime obodo ndị anyị bụ akụkụ nke nnukwu concerts sitere na site 5,000-10,000 eto eto na-. Tupu concerts, anyị gara ụfọdụ n'ụlọ akwụkwọ na kpọrọ ha ka na-egosi. Ihe e kwere ka anyị na-ekwu na ọtụtụ n'ime ndị ụlọ akwụkwọ ahụ amachaghị (n'ihi na ha na-abụghị Christian ala na ụlọ akwụkwọ), ma anyị mere ike anyị iji gbaa ụmụ akwụkwọ na-arụtụ ha Christ.
Na concerts, niile ise n'ime anyị see ogbo dị ka otu rowdy, unashamed ndi oru ugbo. Anyị jijiji ndị na nkebi na n'ókè anyị nwere ike na-agbalị ịdị ka anya dị ka o kwere banyere Oziọma na-akpali anyị ime ihe anyị na-eme. Karịa ihe ọ bụla anyị chọrọ folks mara Jesus! Anyị na-agbalị ime ka n'aka na folks-ahapụ ụtọ, ọ bụghị site nkà anyị, ma site Onyenwe anyị.
Anyị na-etinyekwa oge na ndị kwere ekwe si ná mba ọzọ, na a dị iche iche omenala, n'ebe dịgasị iche ndị hụrụ otu Jesus anyị na-eme. Otu n'ime ọṅụ nke na-aga mba dị iche iche a na-echetara nke atumatu Chineke na- “mgbapụta onwe ya ndị si ná mba.” Chineke na-arụ ọrụ, ọ bụghị naanị ebe a, ma n'ụwa nile, -azọpụta folks na iji ha maka ebube ya.
Anyị mụtakwara na Aussies okwu weird. Ha na-akpọ ede ede “capsicum” na ha na-akpọ napkins “akwa nhicha.” Kedu!? Ha na-eche anyị na-ekwu kwa ezie na… All ndị dudes e mkpatụ taa jeans na ha na-akpasu ọtụtụ miniature ụgbọala. Ụfọdụ n'ime ụmụ akwụkwọ chere Thi'sl bụ ​​Biggie (ha amaghị na ọ nwụọla!) na ha chere na m bụ Bow Chaị (ọ bụghị nke m proudest oge). Iji mee ka elu maka na ụfọdụ n'ime anyị ụsụụ ndị agha nyere ụfọdụ na-atọ ụtọ Aussie Grịl-Haus, na nwa-aturu, ọkụkọ, na ọbụna ụfọdụ kangaruu. Ọ dị mma!
This'l eri ụfọdụ Grịl-Haus kangaruu
Mere m Hụrụ Ọ
Otu n'ime ihe n'oge m nwere na Australia nọ na-enweta na-agaghịkwa na ya na ụmụnne m. The mkpakọrịta bara ọgaranya, mmekọrịta na-agbajikwu, na m na-edified Chineke na mkparịta ụka. M chetara ihe ọma mkparịta ụka banyere alụmdi na nwunye, ozi, nna, music, etc. Chineke na-eji mkparịta ụka ndị dị ka ndị na-akpali m na ka n'ezi ọrụ na eme ka ihe m ka Ya. Obi dị m ụtọ na-ngalaba-arụ na rappers, DJ si, na tour oru onye ezi n'anya Jesus.
Ekele dịrị Gị bụ
M chọrọ ikwu na-ekele gị na ministri nke nyere aka ime ka ọ na-eme, na ụsụụ ndị agha bụ onye gosiri magburu onwe ile ọbịa, na ndị na-akwado nke ruru na concerts. Ruo mgbe oge ọzọ, anyị hụrụ gị n'anya Aussie!